KAJOL: “Waqti wanaagsan ayey ku jiraan jillaayaasha Bollywood, maxaa yeelay jillaa walba filimka uu jecel yahay ayuu sameeyaa” – Filimside.net
Atariishada weyn ee Bollywood Film Industry Kajol ayaa waxay daaha ka qaaday inay waqti wanaagsan ku jiraan jillaayaasha haatan ee Bollywood-ku maadaama ay heystaan taageereyaal u jidbeysan kuwaasoo doonaya inay aflaantooda doorar kala duwan ku jilaan marwalba.
Magaca Kajol oo aad maqasho wuxuu ka dhigan yahay inaad soo xasuusaneyso guulihii ay ku hogaamisay aflaanta Dilwale Dulhania Le Jayenge, Kuch Kuch Hota Hai iyo My Name is Khan – balse Kajol waxay haatan daaha ka qaaday in jillaayaasha Bollywood aysan dooneyn inay ciyaaraan doorarkaas oo kale.
Kajol ayaa waxaa marka hore wax laga weydiiyey muranka uu bartanka ka galay filimka Padmavati – balse waxay daaha a qaaday in aysan ka hadli doonin arrimaha ku saabsan filimkaan Padmavati.
Kajol ayaa tiri: “Kama hadli doono kiiska Padmavati, laakiin waxaan u maleynayaa in aysan waqti adag ku jirin jillaayaasha Bollywood waqtigaan, maxaa yeelay jillaa walba wuxuu heystaa waqti ku habboon wuxuuna sameeyaa doorka filim ee isaga ku habboon uuna ka helo.
“Waa sababta aad u arkeyso jillaayaal dhallinyaro ah oo aflaantooda ku jillaya inay duqowsho yihiin, waana wax caksi ah – sababtu maxay tahay? Taageereyaasha ayaa diyaar u ah inay aqbalaan. Waa waqti fantastik maxaa yeelay jillaayaashu waxay helayaan nuuca filim ee ay rabaan”.
Kajol waxay ka hadleysay xaflad gaar ah oo loo qabtay barnaamijka Help A Child Reach 5 ee shirkadda saabuunta Lifebuoy.